Ihe chaja na-agbakwunye maka Macbook Pro ọhụrụ pụtara ịzụta chaja na ihe nkwụnye iche | Esi m mac
Mgbe Apple kpebiri ịmalite ihe ọhụrụ, ọ dịghị ahapụ anyị enweghị mmasị. Dị ka ọ bụla ọhụrụ, ụfọdụ na-eche na ọ bụ na akara nke Apple na-anọchi anya oké nkà na ụzụ ọhụrụ. N'aka nke ọzọ, maka ndị ọzọ, mgbanwe a ezughi oke ma ọ bụ ha rịọ ụlọ ọrụ ahụ ka ọ ju ha anya dịka anyị na-emebu ụfọdụ.
Ejirila esemokwu ahụ ruo ụbọchị ole na ole site na mgbakwunye dị ka ntinye mpụga nke ọhụrụ Macbook Pro, Ntinye USB-C, nke Apple dere Thunderbolt 3 ọdụ ụgbọ mmiri. Isi ihe kpatara eji ụdị ọdụ ụgbọ mmiri ndị a bụ nha ha, nke na-emetụta nhalata belata na ibu ikpeazụ nke akụrụngwa ahụ.
Ọtụtụ bụ ngwa anyị nwere ike itinye n'ime Macbook Pro dịka ha nwere njikọ USB-C. PN'aka nke ọzọ, enwere ọtụtụ ihe nkwụnye na Apple mekwara mkpebi na nso nso a iwelata ọnụahịa ya.
Mana akara ama ama ga - enwerịrị ngwa ndị ọzọ dị mfe ịnweta. Mana dika anyi guru na intaneti Apple N'oge ọ na-enweghị a nnọchi chaja maka ọhụrụ Macbook Pro, ma ọ bụ kama O nweghi chaja doro anya.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ akụkụ mapụtara, ọ bụghị naanị n'ihi ndakpọ ma ọ bụ mfu, kamakwa n'ihi na anyị chọrọ otu na-arụ ọrụ na otu n'ụlọ, dịka ọmụmaatụ, anyị ga-azụrịrị ụdị chaja ochie magsafe mgbe ahụ chaja. Na-eme nọmba, Nkesa ga-abụ € 79 gbakwunyere € 25.
Ya mere, Apple ezighi ezi ịhapụ chaja na akụkụ abụọNke mbụ, n'ihi nsogbu nke ịzụta ngwaahịa abụọ ahụ, nke anyị ga-ezukọkwa, ọ bụ ezie na nke a ekwesịghị ịbụ nnukwu nsogbu na nke abụọ bụ ịzụta chaja maka ihe karịrị € 100, nke yiri m nnukwu ego, ọbụlagodi o sitere n’aka Apple. Ọ bụrụ na ị kwụọ ego ahụ maka chaja, m ga-arịọ gị ka ị nwee ụdị pụrụ iche nke na-egosi ọnụahịa ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Agbanye chaja maka Macbook Pro ọhụrụ pụtara ịzụta chaja na nkwụnye iche
Otu ajụjụ, ahụwo m ụfọdụ unboxing na enwebeghị m ike ịhụ ma ọ bụrụ na chaja ọhụrụ ahụ nwere taabụ abụọ iji nwee ike ịgbanye eriri na ya. Site n'echiche m ma ọ bụrụ na ekwenye na ọ nweghị ha, ọ dị m ka ihe ọzọ kpatara ịghara inweta MacBook ọhụrụ ma gaa n'ihu na-afanyekwa nke ochie ahụ, ndị na-eme njem na-agakarị ịghọta.
Aka, "ihe ngwọta" ma ọ bụrụ na ịnweghị MacBook Pro kachasị ọhụrụ